Ukuphindukuzalwa - Kuyini? izindlela sezenkolo nesayensi
Bambalwa abantu abafana umbono wokuthi ngemva kokufa sisanda zinyamalale futhi akukho okunye kusikhumbuza lokho thina olwalukhona. Ngakho-ke, abaningi ukuba bathole induduzo ezinkolweni ezihlukahlukene futhi izimfundiso ekhuthaza umqondo womphefumulo ongafi. Ukuvunywa ukuguqulelwa kwesinye isimo sokuphila wemiphefumulo, noma ukuphindukuzalwa - kuyini? Ake sicabangele umqondo.
Ukuphindwa ukuzalwa nokufa, ushintsho njalo kusukela ukuphila ukuphila - yilokho yini yokuphindukuzalwa. ukuphila Odlule linendima ebalulekile kule nqubo ezingaqondakali. Lapho umzimba wenyama ufa, endabeni ethile obucayi uhlala. Mhlawumbe kungenxa engqondweni yethu, ukwazi. Kunjalo ukulondolozwa lonke ivolumu zanqwabelana imicabango, imizwa, imicabango kanye nezinkolelo ukuthi intambo welulela phakathi esidlule futhi ukuphila esikhathini esizayo ukhona. Indlela abantu babephila khona zabo zangaphambili inquma inhlalakahle lokuzalwa kwalo okwalandela.
Ezinkolweni postulating ukuphindukuzalwa njalo umphefumulo e impilo entsha, kuyinto umthetho karmic zilandelwe ncamashi. Asikho isenzo, akukho senzo njengesidalwa eziphilayo kungukuthi indiva, "ngenhla." imithetho eqinile of ngokulandelana kukhonjelwe yokuphindukuzalwa. Imuphi lo mthetho? Kukho konke ukuphila kwakhe, umuntu ongena ngandlela-thile, futhi lonke ulwazi mayelana nezenzo zakhe njengoba uhlobo "silotshwe" rekhoda buthule. Esikhathini lokuzalwa esilandelayo, le ephilayo uthola kuleso sijeziso, umzimba wenyama kanye nengcondvo, eye wathola ngenxa ngaphambili. Esikhathini izincwadi Vedic Eqinisweni obungenakuphikwa uhlala - the ukuphindukuzalwa umphefumulo kuyinto umthetho engaguquki khona kwezwe. Akekho bangase baphikise ngokuthi konke okuzelwe, futhi ukufa. Ngenxa yalokho, yonke into efa, umuntu engazalwa ngokusha. Umthetho yokuphindukuzalwa angaphansi nezidalwa ngokuphelele zonke eziphilayo, futhi ngenxa injani, bangakwazi ukusebenzisa noma a unohlobo lokuphila esikhathini sokuzalwa olandelayo, noma kancane athuthukile.
Ingabe umjikelezo samsara alupheli?
Amaqembu amaningi enkolo, abeke phambili umqondo yokuphindukuzalwa komphefumulo, Luzama ukuphendula imibuzo: ukuphindukuzalwa - okungukuthi, kungaba inqubo engapheli? Impendulo kunzima ukunikeza. Ngakolunye uhlangothi, kunengqondo ukuphetha ngokuthi kukhona "isiphetho ephelele" ngokuthi maqembu yokulunga ukuphila ekuphileni, reincarnating kumafomu eyinkimbinkimbi kakhulu, futhi ekugcineni sifinyelela umvuthwandaba ukuthuthukiswa abuye acedzele umjikelezo waso unomphela isimo Blissful. Ngakolunye uhlangothi, ake ucabangele lezi ezifana isimo ekahle oluphakeme kakhulu ukuthuthukiswa akunakwenzeka. Nakuba, mhlawumbe, siye akukafiki ukuthi ezingeni ukhanyisele, lapho singakwazi bona inketho okunjalo.
Yini isayensi uthi?
Umqondo womuntu oyedwa ukuguqulwa unomphela kubonakala e Psychology transpersonal, okungukuthi imibono Carl Jung sika we equlekile ngokuhlanganyela. Lo mqondo ihlangabezana ngokugcwele kulokhu kuphindukuzalwa - okungukuthi uhlobo sokuzuza izithombe womuntu equlekile ejulile ngocansi kuye okhokho bakhe (futhi mhlawumbe ukuze bazikhandle ukubeletha esidlule). Ngaphezu kwalokho, isayensi kunzima ukuphika ukuthi ukhona yomphefumulo ongafi, lapho sesibhekene nesimo amaqiniso, lapho abantu ukukhumbula ezimpilweni zabo esidlule, ngisho ukunikeza ulwazi engakwazanga bazazi kusuka kwamanye zomphakathi leze imithombo.
Uvemvane i- landizela endlini - inhlanhla
LM317 adjustable Umlawuli zamanje
Amaphilisi Kelp: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa
Iphutha "Wenza okuhlukile Imenu e isicelo"